HTC O2၊ နောက် HTC အလံကို၎င်းဟုခေါ်မည်လား။ | Androidsis
HTC O2၊ ၎င်းကိုနောက်ထပ် HTC အလံဟုခေါ်မည်လား။
Alfonso က de Frutos | | HTC က, NOTICIAS
HTC တွင်မီးအနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းရန်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှနောက်ဆုံးဘဏ္reportsာရေးအစီရင်ခံစာများသည်ဆိုးကျိုးထက်ပိုသောအချက်အလက်များကိုပြသခဲ့သည်။ အကယ်၍ HTC သည်ရေပေါ်တွင်ဆက်လက်နေလိုပါက၎င်း၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။ HTC O2 ကလုပ်မှာလား။
ထိုသို့ကောလာဟလများစီးရီးကြောင်းအကြံပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည် HTC O2 သည်လာမည့်အထင်ကရ၏အမည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါ M အကွာအဝေး? ၎င်းကိုမသိရသေးသော်လည်း၎င်းသည်ထိုင်ဝမ်iantရာမအင်ဂျင်နီယာသစ်၏ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုသည်။
HTC O2 သည် Qualcomm Snapdragon 820 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အလုပ်လုပ်သည်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ Cher Wang၊ HTC ၏လက်ရှိစီအီးအို၊ ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာရှင်များအားသူတို့ရဲ့ကိရိယာအသစ်တခုကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တို့ကိုအသိပေးခဲ့ခြင်းကထုတ်လုပ်သူက HTC One M9 ကိုဆက်ခံသူနှင့်အလုပ်လုပ်နေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ယခုတွင်တွစ်တာမှတစ်ဆင့် HTC Titan အသစ်၏အမည်အချို့အပြင်အချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် HTC O2 ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။လက်ရှိသတင်းများသည်ကောလဟာလများသာဖြစ်သဖြင့်၎င်းအချက်အလက်များကိုဆားများဖြင့်ယူရမည်၊ သို့သော်မှန်ကန်ပါက HTC O2 သည် HTC မျှော်လင့်ထားသည့်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့က၎င်း၏၏မျက်နှာပြင်အကြောင်းပြောနေတာကနေစတင်ပါလိမ့်မယ် Resolution ကို6x 2560 Pixels (QHD) ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သော ၆ လက်မ Panelpixel သိပ်သည်းဆမှာ 490 dpi ရှိသည်။ HTC O2 ၏မျက်နှာပြင်အောက်တွင် Qualcomm ၏ Snapdragon 820 ပရိုဆက်ဆာကိုမျှော်လင့်ရသည်။ Snapdragon 820 သည်စွမ်းအားကောင်းသော Adreno 530 GPU အပြင်ရှစ် core core SoC လေးခုပါသော Hydra cores လေးခုပါရှိကြောင်းသတိရပါ။
ဒါ့အပြင် HTC O2 ၎င်းတွင်4GB DDR4 RAM ရှိသည် အတွင်းပိုင်း။ သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 64GB / 128GB နှင့် HTC သည်ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ အဓိကအခန်းကိုကဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည် 20.7 megapixel မှန်ဘီလူးရှေ့ကင်မရာ5megapixel အပြင် Ultrapixel နည်းပညာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
က 3.500 mAh ဘက်ထရီ၊ HTC O2 ၏ဟာ့ဒ်ဝဲအလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့ရန်လုံလောက်သည်။ ဂီတချစ်သူများအနေဖြင့် BoomSound ရှေ့စတီရီယိုစပီကာသည် HTC O67 ကိုဖုန်မှုန့်များနှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် IP2 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရမည့် HTC flagship အသစ်တွင်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
ဤသည်တူညီသောအစီရင်ခံစာတစ် ဦး ၏ပြော၏ ၅ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသည့် HTC O2 ဗားရှင်း၎င်းသည်မော်ဒယ်၏အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်းဖြစ်သည်။
HTC O2 ၏အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုမှာဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အများပြည်သူကိုစိတ် ၀ င်စားလိုပါက HTC သည်အခြားဖုန်းတစ်လုံးပေးရမည်။ ယခုမှာငါတို့သိသမျှပဲ သူတို့ကလူမီနီယမ်ကိုလောင်းကစားလုပ်မယ်၊ ပါးလွှာသော bezels များတပ်ဆင်ထားသည့်အပြင်
ဤကောလာဟလများကိုအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကောင်းမွန်နေပါသည်။ HTC သည်၎င်း၏ထင်ရှားသောအချက်အချာကျသောပုံစံနှစ်ခုနှင့်ရှေ့မျက်နှာပြင် bezels ကိုလျှော့ချခြင်းသည်သင့်လျော်သောအဆင့်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းကိုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည် ထိပ်ကိုပြန်ချင်ရင်ယူရို ၅၀၀ ထက်မကျော်တဲ့ဈေးနှုန်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC O2၊ ၎င်းကိုနောက်ထပ် HTC အလံဟုခေါ်မည်လား။
Pedro Lopez ဟုသူကပြောသည်
၈၂၀? CES သို့မဟုတ် MWC သည်
ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ် HTC တက်ဘလက်ကောကောကောလဟလ?
Galaxy Note5ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့မရောက်ရှိပါ။
၎င်းသည် BlackBerry Venice ဖြစ်ပြီး Android နှင့်ပထမဆုံး BlackBerry ဖုန်းဖြစ်သည်